Spotify dia mandefa kaonty momba ny fianakaviana hatramin'ny olona 6 amin'ny vidin'ny 14,99 isam-bolana | Avy amin'ny mac aho
Spotify dia mandefa kaonty momba ny fianakaviana hatramin'ny olona 6 amin'ny vidin'ny 14,99 isam-bolana
Elaela ny orinasan-tsehatra soedoà Spotify hamaly ny kaontin'ny fianakaviana atolotry ny Apple Music, izay ahafahanay mampiditra mpikambana 5 ao amin'ny fianakavianay afaka mankafy ny Apple Music amin'ny vidiny 14,99 isam-bolana fotsiny. Hatramin'ny nanombohan'ny Apple Music dia nitahiry ny drafitry ny fianakaviana lafo vidy ny Spotify, drafitra izay hany zava-bitan'izy ireo dia ny hampanakaiky ny mpampiasa ny Apple Music noho ity drafitra fianankaviana mahafinaritra ity, izay ahafahan'ny mpampiasa tsirairay manana ny playlists mahaleo tena sy azy manokana.
Spotify dia nanangana ny drafitra fianankaviany vaovao omaly izay hamelana ireo mpampiasa ny sehatra handray izany ary mankafiza amin'ny 14,99 euro hatramin'ny olona enina miaraka, iray hafa noho ny drafitry ny fianakavian'i Apple. Hatramin'ny nahatongavan'ny Apple Music, ireo sehatra roa ireo dia nanjary nanao ampihimamba ny tsenan'ny mozika mivantana avokoa, namela ireo orinasa sasany toa ny Rdio na ny Line Music teny amoron-dalana, na dia tsy tena niainga mihitsy aza ity farany hatramin'ny nandraisan'ny orinasa Japoney taorian'ny nividianan'ny Microsoft azy fonosana Nokia iray ihany ary manana Groove Music, tsy nikasa hitazona serivisy roa hitovy izany.
Amin'izao fotoana izao dia manana mpanjifa 13 tapitrisa i Apple ary i Spotify kosa manana mpampiasa 30 tapitrisa ary mitombo. Hatramin'ny nanombohan'ny orinasan-tserasera Cupertino ny Apple Music dia toa izany no basy fanombohana ny fomba vaovao handaniana mozika streaming. Ny olana tokana amin'ny Spotify dia tsy manome rindranasa zanatany ho an'ny Apple Watch amin'izao fotoana izao, zavatra iray izay mety ho antony lehibe kokoa noho ny antony nampiasan'ireo mpampiasa ny sehatra Apple Music, indrindra raha mpanjifa mavesatra mozika izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Spotify dia mandefa kaonty momba ny fianakaviana hatramin'ny olona 6 amin'ny vidin'ny 14,99 isam-bolana
Marina ve ireo tsaho navoakan'i Ming-Chi Kuo momba ny MacBook Pro?
Fampiharana 10 ho an'ny $ 22 no nomen'ny BundleHunt anay